.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flash Song များတွင် Mouse Follower ထည့်ခြင်း
ဒီနေ့ တော့ လွမ်း... Flash Song နည်းပညာတစ်ခုကို ရေးသားပါမယ်။
တစ်ချို့ သော Flash Song များမှာ Mouse ကို ရွှေ့ လိုက်ရင် Mouse နောက်ကနေ ပုံစံမျိုးစုံလိုက်နေတာကို တွေ့ ဖူးကြမှာပါ။
လွမ်းရဲ့ Flash Song မှာတော့ Mouse Follower ထည့်ထားတဲ့ သီချင်းတွေ နည်းပါတယ်။
ခု ရေးမဲ့နည်းက SwishMax4ထဲမှာ နဂိုကတည်းက ရှိပြီး Mouse Follower ကနေ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပုံစံများကို ပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်သွားတဲ့နည်းလေးပါ။
SwishMax4Software ကို ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။
ပုံတွင်ပြထားတဲ့အတိုင်း Components ထဲက Effect ကို Click ပြုလုပ်ပြီး 2D ကို ထပ်မံ Click လုပ်လိုက်တဲ့အခါ MouseFollower ဆိုတာကို တွေ့ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
MouseFollower ပေါ်မှာ Double Click လုပ်လိုက်တဲ့အခါ Screen ထဲမှာ မျှားပုံလေး ပေါ်လာတာတွေ့ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ပုံတွင်ပြထားတဲ့အတိုင်း Play Button ကို Click လုပ်ပြီး Screen ပေါ်မှာ Mouse ကို လှုပ်ရှားကြည့်မယ်ဆိုရင် Mouse သွားရာနောက်ကို မျှားပုံလေးက လိုက်လာတာကို တွေ့ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ပုံတွင်မြင်ရသည့်အတိုင်း Outline Tab ကို Click လုပ်ကြည့်ပါ။ Arrow Shape ကို တွေ့ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
Arrow Shade အစား မိမိနှစ်သက်ရာပုံစံကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုသွားနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်ဖက်ခြမ်းရှိ Tool Bar ထဲမှ AutoShape ကို Click လုပ်ပြီး 2D အောက်ရှိ Star ပုံကို ရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်။
ပုံတွင်မြင်ရသည့်အတိုင်း Arrow ရဲ့ Move Effect ကို Star တွင် ကူးယူထည့်လိုက်ရပါမယ်။
ထိုသို့ကူးယူပြီးသောအခါတွင် ပုံတွင်မြင်ရသည့်အတိုင်း Arrow ကို ဖျက်ပြီး Play လုပ်ကြည့်လျှင် Star ပုံလေးတွေက Mouse နောက်ကို လိုက်နေတာကို တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းတို့ လည်း မိမိနှစ်သက်ရာပုံစံလေးတွေကို ထည့်ပြီး စမ်းလို့ရမှာပါ။
မိမိ နှစ်သက်ရာ အရောင်လေးတွေကိုလည်း ပြောင်းထည့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
လွမ်းပြုလုပ်ထားတဲ့ Mouse Follower ပုံလေးကို ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Screen ပေါ်မှာ Mouse ကို ထားပြီး ရွှေ့ ကြည့်ပါ။
သူငယ်ချင်းများအားလုံး Flash Song ပြုလုပ်ရင်း စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
နေ့ လည် ၂း၄၅ နာရီ
ဒီပို့စ်လေးကို မလွမ်းဧကရီဆိုဒ်က ကူးယူမျှဝေပါတယ်။
အလည်သွားချင်တယ်ဆိုရင် http://www.shiroi-yume.com/ ပါ။
Posted by Thurainlin at 06:48
Labels: Effect, Flash Song, SWiSH Max, နည်းပညာ